September 11, 2021 - Achawlaymyar
“ပရိသတ္ေတြ အထင္အျမင္လြဲမွားေနမႈ အေပၚ ျပန္လည္ရွင္းျပလာတဲ့” ….
September 11, 2021 by Achawlaymyar
“ပရိသတ်တွေ အထင်အမြင်လွဲမှားနေမှု အပေါ် ပြန်လည်ရှင်းပြလာတဲ့” …. ဒိန်းဒေါင်လူသတ်စစ်ကောင်စီကိုသာ အပြည့်အဝထောက်ခံကြောင်းပြောပြီး လိုင်းပေါ်ကပျောက်သွားခဲ့ပြီးနောက်ပရိသတ်ကြီးရေ ဟာသလူရွှင်တော် ဒိန်းဒေါင်တစ်ယောက်ကတော့ ပရဟိတတွေ လုပ်ရင်း ပရိသတ်တွေရဲ့လေးစားအားကျမှုကို ရထားသူပါနော်။ ဟာသလူရွှင်တော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဒိန်းဒေါင်ကတော့ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း လူအများလုပ်နေကြတဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ ဝင်မပါဘဲ ငြိမ်နေသူတွေထဲမှာ ထိပ်ဆုံးပါပဲနော်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှ ဒိန်းဒေါင်က စစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားပွဲတွေမှာတတ်ရောက်ခဲ့ ပြည်သူတွေကဖယ်ကြဉ်ခြင်းခံထားရသူတစ်ယောက်လဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မလို့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ပြင်းထန်စွာဝေဖန်ခြင်းခံရပြီး ဒိန်းဒေါင်ကတော့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လူမှုကွန်ယက်တွင် တက်လာတဲ့ သတင်းတွေကြောင့် ပြည်သူ့ချဉ်ဖတ် လောက်ကောင် စာရင်းဝင်သွားပါပြီနော်။ စစ်ကောင်စီက ကျင်းပတဲ့ သြင်္ကန်ပွဲတော်မှာ အနုပညာရှင်တစ်ဦးအနေနဲ့ အခကြေးငွေယူကာ သွားရောက်ဖျော်ဖြေခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေ အတော်လေးကို ဒေါသထွက်ခဲ့တာပါနော်။ သူကိုယ်တိုင် ပြောထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်မှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် လစာနည်းနည်းဖြင့် လုပ်ကိုင်နေသူများမှာ စစ်တပ်မှဖြစ်တာကြောင့်ဘယ်သူဘာပြောပြော … Read more
ချစ်သူနဲ့ အသူရှိနေချိန် စမ်းကြည့်သင့်တဲ့ အသစ်အဆန်းလေးများ
ချစ်သူနဲ့ အသူရှိနေချိန် စမ်းကြည့်သင့်တဲ့ အသစ်အဆန်းလေးများ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ချစ်တင်းနှောရတာ စိတ်ကျေနပ်မှု အပြည့်အဝနဲ့ ကျေကျေနပ်နပ် ဖြစ်ရအောင်လို့ အချစ်စိတ်တွေက ဗို့(ထ်)အား ပြည့်နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ချစ်တင်းနှောတဲ့ ကိစ္စဆိုတာ လင်မယားတွေကြားမှာ အရေးပါလှတဲ့ ကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်တဲ့အပြင် အိမ်ထောင်သည်ဘဝ သာယာချမ်းမြေ့ဖို့ အတွက် အရေးကြီးလှတဲ့ အဓိက သော့ချက်လို့ ပြောရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ယောက်ကြားမှာ ချစ်တင်းနှောတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမြဲတမ်းလို စိတ်ပါဝင်စားမှု၊ စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့ ရင်ခုန် စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေ ရှိနေပါမှ အဆင်ပြေမှာပါ။ ဒါကြောင့် တစ်ခါတစ်ရံမှာ မတူညီတဲ့ ခံစားမှုနဲ့ ရင်ခုန်မှုတွေကို ရရှိနိုင်ဖို့ စမ်းကြည့်သင့်တဲ့ အျပုအမှု အသစ်အဆန်းလေးတွေ အကြောင်း ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းလေးတွေ ထဲကအတိုင်း အညှီအဟောက် ဇာတ်ကားတွေကို ပြောတာ … Read more
MyTel တာဝါတွေထိတော့ မအလ အပြင် အသံထွက်လာတဲ့ ဘောခိုးမလေးတွေအကြောင်း သတိပေးလာတဲ့ ပန်ဆယ်လို
MyTel တာဝါတွေထိတော့ မအလ အပြင် အသံထွက်လာတဲ့ ဘောခိုးမလေးတွေအကြောင်း သတိပေးလာတဲ့ ပန်ဆယ်လို… စစ်တပ်ကို လုပ်ပါလား…. တာဝါတွေထိရင် ပြည်သူတွေပဲ နစ်နာတာတဲ့။ အင်တာနက်မရတော့ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့။ လာလာသေး… တာဝါတိုင်တွေက ပြည်သူပိုင်တဲ့။ ဘယ်လို ပြည်သူပိုင်တာလဲ နားမလည်လို့။ အံ့ဩပ။ အင်တာနက်မရတော့ရင်ဆိုတာလေး အရင်ပြောတာပေါ့။ MyTel မရရင် အခြားOperator သုံးလေ။ MyTel ပဲ မိ လို့ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်တော့ စိတ်မကောင်းပေမယ့် အဲ့ဒီ့အနည်းစု အင်တာနက်မရတာအတွက် စစ်ကောင်စီရဲ့ ငွေပင်ငွေရင်းကို ဆွဲမနှုတ်ဘဲ ပြည်သူတွေကို သတ်ဖို့ လက်နက်ဖိုး ဆက်ပေးနေရမှာလား။ သူတို့ပိတ်ချင် ဇက်ခနဲပိတ်လို့ရတဲ့ အင်တာနက်ကို အနည်းစု မရနိုင်တာနဲ့ မလုပ်နဲ့ဆိုတော့ တကယ်ဖြစ်လာရင် အိမ်မှာ ဖုန်းထိုင်ပွတ်လို့ရမယ် ထင်နေတာလား။ Boycott လုပ်ပါဆို တော့ … Read more
၁။စကားကိုလိမ်ညာပြောတတ်ခြင်း။ ၂။လိုတစ်မျိုးမလိုတစ်မျိုးပြောတတ်ခြင်း။ ၃။အခုတစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးပြောတတ်ခြင်း။ ၄။ကိုယ်တဖက်ထဲကြည်၍ပြောတတ်ခြင်း။ ၅။ငြင်းခုံ၍အမှားများကိုပြောတတ်ခြင်း။ ၆။မရှိဘဲကြွားဝါး၍ပြောတတ်ခြင်း။ ၇။ရိုင်းစိုင်းစွာဆဲဆိုတတ်ခြင်း။ ၈။ကိုယ့်ကိစ္စကိုတာဝန်မယူခြင်း။ ၉။ကတိသစ္စာမတည်ခြင်း။ ၁၀။အမှန်တရားကိုလက်မခံခြင်း။ ၁၁။ကိုယ့်အမှားကိုဝန်မခံခြင်း။ ၁၂။ဘာသာတရားကိုလေးစားမူမရှိခြင်း။ ၁၃။အမှန်အမှားကိုခွဲခြားမသိခြင်း။ ၁၄။မတော်လောဘဖြင့်စီးပွားရှာခြင်း။ ၁၅။ငွေကြေးချမ်းသာမူကိုအထင်ကြီးခြင်း။ ၁၆။ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာဣန္ဒြေမရှိခြင်း။ ၁၇။မထိုက်တန်တယ်ရာထူးနေရာယူခြင်း။ ၁၈။သီလသမာဓိမတည်ကြည်ခြင်း။ စိတ်နေသဘောထားနဲ့ အသိဉာဏ် အဆင့်အတန်းမြင့်မားလာလေလေ သဘောထား ကြီးလာလေလေဖြစ်လာတာဟာ သဘာဝဖြစ်ပါတယ်။ “ကုသိုလ် အကုသိုလ်ဆိုတာ ဘာကို ပြောတာလဲ?” အဆင့်အတန်းနိမ့်တဲ့ စိတ်ကို အကုသိုလ်လို့ ပြောတာ။အဆင့်အတန်း မြင့်တဲ့စိတ်ကို ကုသိုလ်လို့ ပြောတာ။စိတ်ကို ပြော တာနော်။စိတ်ရဲ့ အရည်အသွေးကို ပြောတာ။ Credit-(ဆရာတော်ဦးဇောတိက) Zawgyi ၁။စကားကိုလိမ္ညာေျပာတတ္ျခင္း။ ၂။လိုတစ္မ်ိဳးမလိုတစ္မ်ိဳးေျပာတတ္ျခင္း။ ၃။အခုတစ္မ်ိဳးေနာက္တစ္မ်ိဳးေျပာတတ္ျခင္း။ ၄။ကိုယ္တဖက္ထဲၾကည္၍ေျပာတတ္ျခင္း။ ၅။ျငင္းခုံ၍အမွားမ်ားကိုေျပာတတ္ျခင္း။ ၆။မရွိဘဲႂကြားဝါး၍ေျပာတတ္ျခင္း။ ၇။႐ိုင္းစိုင္းစြာဆဲဆိုတတ္ျခင္း။ ၈။ကိုယ့္ကိစၥကိုတာဝန္မယူျခင္း။ ၉။ကတိသစၥာမတည္ျခင္း။ ၁၀။အမွန္တရားကိုလက္မခံျခင္း။ ၁၁။ကိုယ့္အမွားကိုဝန္မခံျခင္း။ ၁၂။ဘာသာတရားကိုေလးစားမူမရွိျခင္း။ ၁၃။အမွန္အမွားကိုခြဲျခားမသိျခင္း။ ၁၄။မေတာ္ေလာဘျဖင့္စီးပြားရွာျခင္း။ … Read more
“သင့္ကို အသက္ ( ၇ )ႏွစ္ေလာက္ ပိုငယ္သြားေစမယ့္ ဂ်ပန္႐ိုးရာ အႏွိပ္ေလ့က်င့္ခန္း (၇) ခု”
“သင့္ကို အသက္ ( ၇ )ႏွစ္ေလာက္ ပိုငယ္သြားေစမယ့္ ဂ်ပန္႐ိုးရာအႏွိပ္ေလ့က်င့္ခန္း (၇) ခု” အသက္အ႐ြယ္ရလာရင္ မ်က္ႏွာရဲ႕အေရျပားက တြဲက်ပါတယ္ ဒါကမ်က္ႏွာက ႂကြက္သားေတြ အားနည္းလာတာသာမကပဲ ကိုလာဂ်င္ဓာတ္ ေလ်ာ့က်လာလို႔လဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးျခင္းရဲ႕ ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ မ်က္ႏွာကအ႐ိုးေတြေ႐ြ႕ကုန္လို႔ပါပဲ။ အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ မ်က္ႏွာေက ဝဝါးလာၿပီးပါးနဲ႔ေမးေစ့ေတြေလ်ာ့တြဲလာတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးျဖစ္တဲ့ ခ်ီေယာ့ဟယရွီက ဒီျပႆနာကို ရွင္းဖို႔ အေကာင္းဆုံး လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ မ်က္ႏွာမွာရွိတဲ့ ေသြးတစ္ရႉးေတြ လည္ပတ္ဖို႔နဲ႔ ဦးေခါင္းခြံက အ႐ိုးေတြ ပုံမွန္အတိုင္း ရွိေစဖို႔ ကူညီမယ့္ အထူးႏွိပ္နည္းကို သိခဲ့ပါတယ္။ ထိုစနစ္ကို ခို႐ုဂိလို႔ေခၚပါတယ္။ Bright Sideက ထိုႏွိပ္နည္းကို မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာ မွ်ေဝေပးဖို႔ စိတ္အားထက္သန္ေနတဲ့အတြက္ ေခါင္းစဥ္ရဲ႕အဆုံးမွာရွိတဲ့ အပိုဆုေလးကို အလြတ္မခံနဲ႔ေနာ္။ အေရးႀကီးတဲ့မွတ္စု ႂကြက္သားေတြကႏွစ္ၾကာတာနဲ႔အမွ် … Read more
နွားနို့ခိုးသောက်လို့ ရိုက်နှက်ခံရပြီး ဒဏ်ရာတွေကြောင့် ပျံလွန်တော်မူသွားတဲ့ သက်တော် (၉)နှစ်အရွယ်ကိုရင်လေးတစ်ပါး
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ကျေးသီးမြို့နယ် မိုင်းကောင်ကျေးရွာအုပ်စု မိုင်းကောင်ကျေးရွာရှိ ကိုရင်လေးတစ်ပါး နွားနို့ ခိုးသောက်တာကြောင့် ရိုက်နှက်ခံရပြီးနောက် ပျံလွန်တော်မူသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ် (၂၄)ရက်နေ့မှာ ကျောင်းရှိကိုရင်လေးတွေဟာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်အပြီးမှာ သက်တော် (၉)နှစ်အရွယ် ကိုရင်လေးတစ်ပါးက နွားနို့ခိုးသောက်တာကြောင့် ဦးဇင်းတစ်ပါး ရိုက်နှက်ဆုံးမပြီးနောက် ဒဏ်ရာတွေကြောင့် စက်တင်ဘာ (၃)ရက်နေ့မှာ ပျံလွန်တော်မူသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရင်လေးဟာ ဆယ်ချက်ကျော် အရိုက်ခံခဲ့ရသလို အရိုက်ခံရပြီးနောက်မှာလည်း ခေါင်းကိုက်ပြီး သုံးလေးရက်အကြာမှာတော့ လေဖြတ်သလိုဖြစ်ကာ ခြေထောက်တွေမလှုပ်နိုင်တော့ဘူးလို့ မိသားစုဝင်တွေက ဆိုပါတယ်။ ကိုရင်လေးဟာ အရင်က အတက်ရောဂါအခံရှိသူဖြစ်ပြီး မိဘနှစ်ပါးစလုံးကလည်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရိုက်နှက်ခံရပြီးနောက် ပျံလွန်တော်မူသွားတဲ့ ကိုရင်လေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဆရာတော်တွေ၊ ရပ်ရွာဥက္ကဌတွေဟာ ဆွေးနွေးမှုတစ်စုံတစ်ရာ ပြုလုပ်ပေးတာ မရှိသေးဘူးလို့လည်း သိရပါတယ်။ ကိုရင်လေးရဲ့ မိသားစုဝင်တွေကတော့ ကိုရင်လေးကို အခုလို … Read more
မိန်းမရင်သားကို ကိုင်လိုက်တာနဲ့ အသက်အတိအကျ ပြောနိုင်တဲ့ ဆရာကြီးကိုမှ ပညာစမ်းမိတဲ့ ဘောစိမမတစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်
မိန်းမရင်သားကို ကိုင်လိုက်တာနဲ့ အသက်အတိအကျ ပြောနိုင်တဲ့ ဆရာကြီးကိုမှ ပညာစမ်းမိတဲ့ ဘောစိမမတစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ် ဘောစိမမတယောက်…သူ့မရဲ့လေးဆယ့်ငါးနှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ အလှပြင်ဆိုင်ကိုသွားပြီး ….မျက်နှာပေါ်ကအရေးအကြောင်းတွေကို ဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တယ် ပိုက်ဆံတော်တော်ကုန်သွားပေမဲ့မှန်ထဲမှာမြင်နေရတဲ့…သူမရဲ့နုပျိုနေတဲ့မျက်နှာလေးကိုတွေ့တော့ကျေနပ်ပြီးပြုံးနေတယ် ရုပ်ကနုပျိုသွားတော့…သူမရဲ့စိတ်ကလည်းလန်းဆန်းတက်ကြွလာပြီး…အိမ်ပြန်လမ်တလျှောက်လုံးမှာ… သူမရဲ့ဟန်ပန်အမူအရာတွေက တကယ့်ကို…ဖျက်လတ်သွက်လတ်နေတာပါ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု့မြင့်မားလာခြင်းနဲ့အတူ…တပါးသူတွေရော သူမအပေါ်…ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာ…သိချင်လာတယ် အာ့နဲ့..ဖိနပ်ဆိုင်ထဲဝင်သွားပြီး…ဖိနပ်တရံဝယ်ယူပြီးတဲ့နောက်မှာ…အရောင်းဝန်ထမ်းကောင်လေးကိုမေးလိုက်တယ် 👩” ဟိတ် ! မမတခုမေးရင်မောင်လေးစိတ်မဆိုးဘူးထင်တယ်” ” မမ အသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲ သိလား ” ” ၃၂ လောက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ် မမ ” ” အို ! မဟုတ်ပါဘူးမောင်လေးရယ်” ” ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးပါနော် မွမွ ” ဆိုင်ထဲကထွက်လာချိန်မှာတော့သူမဟာ ပီတိနဲ့အတူတိမ်တွေကိုစီးမျောနေရသလိုပါ နောက်ထပ် KFC ဆိုင်ထဲကိုဝင်လိုက်တယ် ကောင်တာကကောင်မလေးကို သူ့အသက်ကို…ခန့်မှန်းခိုင်းပြန်တယ် ” ၃၀ တော့ရှိမယ်ထင်တယ် မမ ” ” … Read more
ရက်ရက်စက်စက် သိသိသာသာကို အသားဖြူမြန်စေတဲ့ အာလူးပြုတ်အစွမ်း ဒီတစ်ခါတော့ ဈေးကြီးနာမည်ကြီးတဲ့ အလှကုန်တွေ သုံးစရာမလိုဘဲ မျက်နှာအသားအရေကို သိသိသာသာ ဖြူဝင်းစေနိုင်မယ့် မှော်ဆန်ဆန် အာလူးပြုတ်နည်းလမ်းအကြောင်း မျှဝေပေးပါရစေ ။ ဒီနည်းလမ်းလေးဟာ သင့်မျက်နှာကို ခဏတာသာ ဖြူဝင်းစေတာမဟုတ်ဘဲ ထာဝရဖြူစေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းလို့တောင် တင်စားကြပါတယ်….ပထမဆုံး အာလူးကို ဆေးကြောပြီး ပြုတ်လိုက်ပါ ။ နူးသွားပြီဆိုလျှင် အခွံခွာပြီး ကောင်းစွာ ကြိတ်ခြေပါ။ ပြီးနောက် အရောအနှောမပါသော ဒိန်ချဉ် အနည်းငယ်ကို ထည့်မွှေပါ ။ ဒိန်ချဉ်မရှိလျှင် နွားနို့ ထည့်လို့ ရပါတယ် ။ နောက်ဆုံးတွင် ပျားရည် လက်ဖက်ရည် ၁ဇွန်းနှင့် သံပုယိုရည် ၃စက်ခန့် ထပ်ထည့်မွှေလိုက်ပါ ။ အားလုံးနှံ့စပ်အောင် မွှေပြီးလျှင်တော့ မျက်နှာပေါ်သို့ သုတ်လိမ်းထားလိုက်ပါ ။ နာရီဝက်ခန့်ကြာလျှင်တော့ … Read more
မိဘမဲ့ကလေးပေါင်း ၈၇ ယောက်တို့အား နှစ် ၄၀ ကျော် တစ်ကိုယ်တည်း ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့တဲ့ မေတ္တာရှင်အမျိုးသမီး
တရုတ်နိုင်ငံ Guangxi ပြည်နယ်မှ Mai Qiongfang အမည်ရှိအမျိုးသမီးဟာ နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော်ကြာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ရပ်ကွက်မှကလေး ၈၇ ဦးအား သူမကိုယ်တိုင်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ သူမကို ကျေးဇူးတင်သောအားဖြင့် အဆိုပါမိဘမဲ့ကလေး ၈၇ ယောက်မှ အယောက်၂၀ ဟာ Beijing တက္ကသိုလ်နှင့် Tsinghua တက္ကသိုလ်ကဲ့သို့ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များတွင် လက်ရှိပညာသင်ကြားလျက်ရှိပါတယ်။ ၎င်းအဖြစ်ဟာ Baise မြို့ People’s Hospital ရဲ့အဝတ်လျှော်စက်၌ လက်လုပ်လက်စားအဖြစ် အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ၁၉ နှစ်အရွယ် Mai ဟာ ဖျားနာနေတဲ့အဘွားကြောင့် သူ့ရဲ့အလယ်တန်းကျောင်းကို ဆက်မတက်နိုင်တော့တဲ့ကောင်လေးကို တွေ့ခဲ့တဲ့ ၁၉၇၉ ခုနှစ်မှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ကောင်လေးဟာ Guilin မြို့ရှိအလယ်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းသို့တက်ရန် စိတ်ကူးခဲ့သော်လည်း အဖွားဖြစ်သူရဲ့ဆေးရုံစရိတ်များအတွက်သာ ငွေအနည်းငယ်ကျန်တာကြောင့် Guilin မြို့သို့မသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ နောက်ပိုင်းတွင် Mai … Read more
နောက် ၄၈ နာရီအတွင်း ပိုမိုအားကောင်းလာကာ မုန်တိုင်းငယ် အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိနိုင်
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့အလယ်ပိုင်းနဲ့ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့ မြောက်ပိုင်းတို့မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းဟာ နောက် ၄၈ နာရီအတွင်း ပိုမိုအားကောင်းလာကာ မုန်တိုင်းငယ်(Depression) အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ မိုးဇလဌာနက စက်တင် ဘာ ၁၁ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာချက်အရ ခန့်မှန်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာလည်း မုတ်သုံလေ အားကောင်းနေပြီး တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အားကောင်းတဲ့ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း “ကွန်စွန်း”(CONSON)ကတော့ ဗီ ယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဒါနန်းမြို့(Danang)ရဲ့အရှေ့-အရှေ့ တောင်ဘက် မိုင်(၉၀)ခန့်အကွာ ပင်လယ်ပြင်ကိုဗဟိုပြုနေကာ အနောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၄ နာရီအတွင်း ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ ရှမ်းပြည် နယ်(အရှေ့ပိုင်း)တို့မှာ တိမ်အသင့်အတင့် ဖြစ်ထွန်းခဲ့ပြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)မှာ နေရာကွက်ကျား၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အောက်ပိုင်းမှာ နေရာကျဲကျဲ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ … Read more